> Resource > Utility > Sida loo dayactir ama u saar Khaladaadka Loading NvCpl.dll
Waa maxay NvCpl.dll?
NvCpl.dll waa file maktabadda u NVIDIA bandhigay adabtarada ah. Waxa ay ku raran yihiin sida wax xawaaladaha ah, in shuban Control Nvidia guddiga iyo caawiyaan si loo farsameeyo ee files kala duwan iyo in macluumaadka Nvidia kaararka garaafyada u isticmaalaan si ay u caawiyaan your computer ordaan sida habsami intii suurto gal ah.
Geedi socodka Non-habka jeclaan nvcpl.dll soo jeedaan software aad rakibay habka. Waxaa la sameeyo Xisbiga Saddexaad, laakiin u badan tahay ammaan yahay. Nasiib darro, file waxa ay inta badan waa sababta badan oo khaladaad, keenaya PC si ay u noqdaan dhaawacan iyo khalad.
Baadi nvcpl.dll Caadiga
Error loading C: Windowssystem32NvCpl.dll. Module cayimay lama hubin
Sababaha ugu weyn ee keenaya baadi NvCpl.dll
• Waxyeello ama maqan NvCpl.dll
• weerarkii ah furin, adware ama spyware kale
• rakibo qaldo codsiyada
• Waxyeello ama daaqadaha huriye diiwaanka
• wadayaasha qalab daaqadaha dhacsan oo u baahan in la xariirta
• kharribeen qoondaynta file
Sida loo hagaajin baadi NvCpl.dll?
Xalka 1. uninstall barnaamijka
Haddii qalad u muuqdo ka dib markii la rakibey barnaamijka, ayaa la rejeynayaa in aad uninstall marka hore. Rakibo si qalad ah codsiyada had iyo jeer keena kara qalad DLL ah. Haddii barnaamijka kharribmay, oo burburay ama soo dhacsan, waxay keeni kartaa qalad la mid ah tan ay sabab u tahay. Si loo hubiyo in tani ma aha arrinta, aad ka saari kara barnaamijka oo dib-u-soo dajiyo.
Xalka 2. Nadiifi baxay fayrusyada iyo diiwaanka
Virus qaadsiin karaan faylasha DLL kala duwan on your computer, oo waxay keeni kartaa file u aqrin. Si loo hubiyo jawi waa nadiif on your computer sameeyo, waxaad u baahan tahay in baarista computer iyo xaaqin barnaamijyada fayraska, oo markaas nadiif ah ka baxo ama u dayactiro aad diiwaanka Windows, oo waa goolhayaha ugu xog muhiim u ah nidaamka. Marka baadi yimaado ilaa, diiwaanka laga yaabaa in la beddelay. Qofku waa in uu dhiso ama nadiifiso macluumaadka aan waxtar lahayn kaydiyaa it on. Si tan loo sameeyo, waxaad isticmaali kartaa nadiifiye diiwaanka , kaas oo kaa caawin kara in ay shaqada buuxiso si fudud oo dhaqso, sababtoo ah waa khatar in wax laga beddelo diiwaanka gacanta.
Xalka 3. Update aad drive Nvidia
Waxaa sida caadiga ah ay dhacdo in Nvidia soo kaxayno on your computer noqdo dhacsan ama kharribeen, iyo tan idiin keeni fariin qalad ah. Sidaas idin ​​tagsiin karo mid ka mid ah jirka iyo rakibi mid cusub, ama uun tagaan website Nvidia inaad kala soo baxdo ka mid danbeeyay ee your computer.
Xalka 4. Download Hal.dll ah
Waxa kale oo aad dooran kartaa in aad file Hal.dll ka Internet, si uu u badalo mid khaldan. Waxaad ka raadin kartaa saami ridanno kii of online. Halkan internetka ee DLL-FILES.COM waxaa lagu talinayaa, halkaas oo aad ka heli karto files DLL kala duwan.
Waa maxay bootmgr & sida loo hagaajin baadi bootmgr